“Waa xushmad darro.”. Antonio Conte oo ka hadlay wararka Sanchez la xiriirinaya Chelsea – Gool FM
“Waa xushmad darro.”. Antonio Conte oo ka hadlay wararka Sanchez la xiriirinaya Chelsea
Byare April 4, 2017
(London) 04 Abriil 2017. Antonio Conte ayaa sheegay inay xusmad darro ku tahay Arsenal iyo ciyaartoyda kooxdiisuba in laga hadlo suuro galnimada Alexis Sanchez lagu keeni karo Chelsea.
Qandaraaska uu Sanchez ku joogo Emirates Stadium ayaa dhici doona 2018, Gunners ayaana u dul qaadaneysa kal ciyareed adag iyadoona ku jirta kaalinta 6-aad ee Premier League, warar la isla dhex qaaday ayaa soo jeediyay inuu ka tagi karayo dhaliyaha reer Chile.
Blues ayaa lala xiriirinayay inay u soo dhaqaaqi doonto xiddiga Arsenal kaddib wareysigii muranka dhaliyay uu bixiyay Sanchez kaa uu ku sheegay inuu doonayo sii joogista London iyo inuu la jiro koox guul gaareysa.
Yeelkeede, Conte ayaa meesha ka saaray suuro galnimada ay ugu dhaqaaqi karaan laacibka ugu goolasha badan Arsenal xagaagan.
“Waad ogtahay ma jecli inaan ka hadlo ciyaartoyda kale ee kooxaha kale,”. Conte ayaa sidaa ka yiri shirkiisa jaraa’id ee ka hor kulanka berito ee Man City.
“Waxay xushmad darri ku tahay kooxda kale, marka waxaa oo dhan laga soo tagana waxay xushmad darri ku tahay ciyaartoydeeda. Ma ahan waqtiga ku haboon si looga hadlo wax ku saabsan arrinkan.”.
Dhanka kale macallinka reer Talyaani oo ka hadlaya taam ahaanshaha Victor Moses ee kulanka berito ayaa yiri:
“Ma garanayo haddii la heli doono Victor Moses, waxaa harsan maalin kale oo xaalada lagu hubin karo.
“Waa inaan sida saxda ah u hubinaa xaalada. Waxaa jirta dhowr xaaladood ay tahay inaan hubino intaa kaddibna aan sameyno go’aanka ugu fiican ee shaxda aan ku soo bilaabaneyno berito.”.
Taageerayaasha Arsenal oo saakay dibad bax ka dhigay xerada tababarka kooxda
David Luiz oo weli la dhibtoonaya dhibkii uu u geystay Aguero....(Ma aar-gudasho ayaa jiri doonta berito?) Conte ayaa ka jawaabaya